Ubundlobongela besilisa kunye nokuthandana kwabasetyhini - yenye yoluvo loluntu oluqhelekileyo. Abameli bezesondo ezifanelekileyo kunye nabameli bezesondo eziqinileyo zihluke kakhulu komnye nomnye, kwaye ingakumbi umahluko ophezulu ekuphononongweni kobudlelwane bobuqu, ekuqaliseni ukuba isondo kubalulekile ekudibeneyo.
Indoda, ngokwembono yabasetyhini, inomdla kuphela kwisini kwaye akukho nto enye, kunzima ukulindela ukuvuma okuthandwayo kunye nentsebenziswano evela kuye. Kwaye, abafana, ubudlelwane obusondeleyo bahlolisise iimvakalelo zabo zangempela kubanikazi, banqume ukuba bangaphi na abafuna ukuba nabakhethiweyo babo.
Kukholelwa ukuba ubulili obuvumelanayo bunceda amadoda ukuba athole uthando lokwenene, kodwa abafazi, ngokuyinxalenye, bayithwalwa yile ndoda kuphela emva kwexesha-okokuba, emva kokuba baba ngabahlobo, bafanele baqonde kakuhle kwaye baxelele iminqweno efanayo kwaye bafunde ihlabathi likomoya loqabane. Ngokuqhelekileyo, ngexesha elifanayo, xa umntu esetyenziselwa imisebenzi esebenzayo kwaye elahliwe ukuba alalane ngesondo, ibhinqa ayifuni kulo nto. Ngenxa yoko, i-chevalier "ihlupheka" kwaye "ihlushwa" ezama ukuqonda into awayenzile ngayo, yintoni impazamo yakhe, kutheni iyanqatshwa, kwaye uzama ukufumana iinkcazo eziqhelekileyo zivela kwiimeko zangempela. Ngokuqinisekileyo, indoda ingabona uthando kumfazi onomdla kuye kwaye unomdla kuye ngobubele kuye, kodwa ekugqibeleni uyayiqonda ngokwenene ubuhlobo bakhe bokwenene ngokuvisisana ngesondo kunye nentanda yakhe, kulo mbuzo impendulo yombuzo - isondo kubalulekile ubudlelwane-obuhle . Kwabesetyhini, isondo ngobudlelwane alubalulekanga.
Ngoxhasano lobuhlobo obusondeleyo, le ntokazi inquma ukuba yintoni ebonakalayo kumcebisi wakhe, ukuba ufuna kangakanani, indlela enothando nangothando ngayo. Enyanisweni, ukubaluleka kwesondo kwezobudlelwane kubangelwa kukuba ubudlelwane bezesondo buhlukanisa phakathi kobuhlobo phakathi kwendoda kunye nomfazi olwalamano oluthandana okanye oludibeneyo.
Enyanisweni, isondo kubalulekile kubasetyhini nakwamadoda. Ngoko, kufuneka aqonde ukuba inkokhelikazi yakhe yesini inentsingiselo efanayo kuye, ukuba, njengoye, ufumana uxolo olufanayo ukusondelana. Isondo esibalulekileyo kwiintlalontle kunye nakwabaseTyhini, nangona imfuno yalo kubonakala emva kokuvela kwamava anemvakalelo enamandla. Kwaye kwaphawulwa ukuba abantu, isondo, ekuqaliseni ubudlelwane, kuhloswe kuphela ekuvuyiseni, kunye nolwalamano nolwalamano olusondeleyo luya kwisicwangciso sesibini okanye sesithathu. Intombazana, kule meko, inokuziva ngathi idonsa, esetyenziselwa ukuhlangabezana neemfuno zenyama.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kubameli bezesondo eziqinileyo, uvakalelo luthando ludibaniswa nokukhanga okungenakuphikiswa kumfazi othandekayo kwaye kaninzi kufuneka enze imizamo enzima ukuze "angazivumeli", kodwa ngexesha elifanayo le nto eyenza abafazi bacinge ukuba ukhetho lwabo bafuna kuphela umbhede. Nangona kunjalo, kungakhathaliseki ukuba kubaluleke kangakanani ubulili kulwalamano, amadoda nawo adinga uthando kunye nolwalamano kunye nokuthandana, kuphela kumadoda, loo mfuneko ibangelwa ukukhangwa kwezesondo, kunye nakwabasetyhini yonke into eyenzeka ngokulandelanayo.
Ngaloo ndlela, umbuzo wukuthi ubulili bubalulekile ubudlelwane bubukhulu becala kubabameli bobulili obuqinileyo nobuhle. Kuphela yindawo apho ubulili buhlala kwimpilo yabesilisa nabasetyhini-eyahlukileyo, kuba ihluke kakhulu, ingaqhelekanga, kodwa ngelo xesha ayinakuhlala ngaphandle komnye.
I-Strawberry ne-cottage cheese
U-Anastasia Reshetova waphukiswa ngumculo kaTimati, ozinikele ku-Alena Shishkova
Umyeni uyabalalisa ngokubanzi uhlahlo lwabiwo-mali
Iinqununu ezinamahlombe aneengqungquthela
Ipukkin kunye neepencake ze-orange
Uncedo lweQumrhu Eliyintloko